Shayga Daaqadda birta leh & albaabka
Waxyaabaha Bir la shubay / bir la shubay / bir
Daaweynta dusha Dahaarka budada / rinjiyeynta / dubista waa dhammaatay
Midab Madow / caddaan / bunni / caadaysan
Dhammeyn gaar ah Anti-miridhku galvanized
Cabbirka Heerka 1000mm*2100mm / gaar ah ayaa loo habeeyay
La xiriir Kooxdayada Naqshadeynta si aad u hesho xigasho shaqsiyeed oo aad bilowdo habka injineernimada daaqaddaada & albaabkaaga cusub.
Iyada oo leh qiyaaso qiyaas ah, waxaan kugu heli karnaa qiimeynta daaqadda & albaabka looga baahan yahay gurigaaga iyo booskaaga! Ha ka welwelin saxsanaanta tallaabadan hadda, marka xigashada la dhammaystiro, kooxdayadu waxay ururisaa macluumaadka intiisa kale ee loo baahan yahay.
Qiimaha nidaamka daaqaddaada & albaabkaaga waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee daaqadda & albaabka aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaynta ee aad doorato.
Tallaabada 4: Daaqadda & albaabka Sameynta
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamka daaqaddaada & albaabkaaga ayaa wax -soo -saar ka samaynaya warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad dhalada dhalada ah sidaa darteed waxaan awoodnaa inaan soo saarno qayb kasta oo ka mid ah daaqadaada & albaabkaaga.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Waxaan awoodnaa inaan si sax ah u saxno sababta oo ah waxaan xakameynaa hannaanka injineernimada ee nidaamka oo dhan, waxayna ka dhigaysaa habka rakibidda shaqo isku -dhafan oo fudud.
Marka daaqadaada & nidaamka albaabkaaga la been abuuro, waxaan ku rari doonaa sawirka tilmaamaha rakibidda oo waxaan ku bixin doonaa tilmaamaha rakibaadda onlaynka. Badeecadeenu waa fududahay rakibidda DIY oo inta badan aan loo baahnayn alxanka. Inta badan mashaariicda waxaa lagu dhammayn karaa maalmo yar gudahood.
Hore: Taayirada Birta ee Dhaqanka ee Caadiga ah ee Balkoonka ama Jaranjarada
Xiga: Qiimo Macquul ah Daaqadaha Birta Wanaagsan ee Birta ah & Albaabada
Ilaalada Daaqadda Birta ah ee Qurxinta leh
Daaqadaha Amniga Birta Wired
Ilaalada Daaqadda Birta Xirmay
Daaqadaha Birta Qallalan